အနီအောက်ရောင်ခြည် - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၂:၅၁၊ ၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ နေ့က NjsBot (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) (ဘော့ - စာသားများကို အလိုအလျောက် အစားထိုးခြင်း  (-ဂြိုလ် +ဂြိုဟ်, -ဓါတ် +ဓာတ်, -၀န် +ဝန်)) တည်းဖြတ်သည့်မူ
လူနှစ်ဦးအား အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ထားပုံ
အင်ဖရာရက်ရောင်ခြည် (သို့) အနီအောက်ရောင်ခြည် ဆိုသည်မှာ အနီရောင်အပြင်ဖက်ရှိ ရောင်ခြည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရ၍ ထိုရောင် ခြည်မျိုးသည် ပူနေသည့်ပစ္စည်းများမှ ထွက်ပေါ်လာမြဲဖြစ်သည်။ အလင်းရောင် ထွက်ပေါ်လောက်အောင် တောက်လောင်နေသော ပစ္စည်းတစ်ခုခုမှ အလင်းရောင်ကို၊ ပုံပမာ· နေရောင်ကို သုံးမြှောင့်ဖန်တုံးခေါ် ပရစ်ဇမ်ဖြင့် ခံကြည့်သောအခါ သက်တံ့ မှာကဲ့သို့ ပြာ၊ စိမ်း၊ ဝါ၊ နီ စသော အရောင်ခုနစ်မျိုးပါသည့် ရောင်စုံသက်တံ့စင်းကိုရသည်။ ထိုရောင်စုံသက်တံ့စင်းကို စပက် ထရမ်ဟုခေါ်၏။ သက်တံ့စင်းသည် တစ်ဖက်တွင် အနီရောင် ဖြင့် အဆုံးသတ်၍ အနီရောင်အပြင်ဖက်၌ မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင် သော အရောင်မရှိချေ။ သို့ရာတွင် အပူတိုင်းကရိယာဖြင့် စမ်းသပ်ကြည့်လျှင်ကား ရောင်ခြည်တစ်မျိုးရှိကြောင်းကို သိရ၍ ထိုရောင်ခြည်များမှာ အင်ဖရာရက်ရောင်ခြည်များပင် ဖြစ်ကြ ပေသည်။ အပူကိုဆောင်သော ရောင်ခြည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ထိုရောင်ခြည်များကို တစ်ခါတစ်ရံ အပူရောင်ခြည်များဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။ ဥပမာပြရသော် မီးစွဲနေသည့် မီးသွေး တစ်ခဲကို မီးဖိုမှထုတ်ယူလိုက်လျှင် နီရဲသောအလင်းရောင်သည် တဖြည်းဖြည်း မှိန်သွားလိမ့်မည်။ သို့သော် အလင်းရောင် ပျောက်သွားပြီးသည့်တိုင်အောင် မီးခဲအနီး၌ လက်ကိုပြကြည့်ပါ က အပူရှိန်ရှိသေးကြောင်းကိုမူ ထင်ရှားစွာတွေ့ရလိမ့်ပေမည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ အင်ဖရာရက်ခေါ် အပူရောင်ခြည်များ ရှိခြင်း ကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်။
အင်ဖရာရက်ရောင်ခြည်သည် အလင်းရောင်ခြည်များ နည်းတူ လှိုင်းသဘောဖြင့် ရွေ့လျားပျံ့လွင့်ကြ၍ ဒြဗ်ဝတ္ထု တစ်ခုခုပေါ်သို့ ကျရောက်သောအခါ အပူကိုဖြစ်စေသည်။ အချို့ သော အင်ဖရာရက်ရောင်ခြည်များ၏ လှိုင်းအလျားသည် အရှည် ဆုံးဖြစ်သော အလင်းလှိုင်းတို့ထက် အဆပေါင်း ၄ဝဝ ခန့် ပင် ပို၍ရှည်ကြသေးသည်။ ထိုသို့ လှိုင်းအလျား ရှည်ခြင်းကြောင့် သာမန်အလင်းရောင်ခြည်များ မဖြတ်သန်းနိုင်သော ပစ္စည်းများ ကို ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်ကြသည်။ လူသားတို့သည် ၁ဝ၅ဝ နာနိုမီတာရှည်သောလှိုင်းအလျားကို မြင်နိုင်စွမ်းရှိကြသည်။ သို့ရာတွင် ဖန်နှင့်ရေကဲ့သို့ သော အချို့ပစ္စည်းများမှာမူ သာမန်အလင်းရောင်ခြည်များကို လွယ်ကူစွာ ဖြတ်သန်းသွားလာစေသော်လည်း အင်ဖရာရက် ရောင်ခြည်များကိုကား ဖြတ်သန်းခွင့် မပြုကြချေ။ ယခုအခါ အင်ဖရာရက်ရောင်ခြည်ဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ယူ နိုင်သည့်ဖလင်များကို တီထွင်ထားပြီဖြစ်ရာ ထိုဖလင်မျိုးဖြင့် လုံးဝမှောင်နေသည့်အခန်းထဲမှာပင် ဝတ္ထုပစ္စည်းများကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်ယူနိုင်ပေသည်။
အင်ဖရာရက်ဓာတ်ပုံပညာ(အင်ဖရာရက်ရောင်ခြည်ဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းပညာ)သည် လေကြောင်းမှ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူရေး တွင် အလွန်အရေးပါ၏။ ထိုဓာတ်ပုံရိုက်ကိရိယာမျိုးဖြင့် မိုးများ အုံမှိုင်းနေချိန်မှာပင် ဓာတ်ပုံရိုက်ယူနိုင်ရာ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ အင်ဖရာရက်ရောင်ခြည်တို့သည် တိမ်တောင်တိမ်လိပ်များကို ဖောက်ထွင်းသွားလာနိုင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်။ အင်ဖရာရက်ရောင်ခြည်၏ အသုံးကျမှုများမှာ မနည်း လှချေ။ ဤရောင်ခြည်များဖြင့် အကြော၊ အဆစ်ရောင်နာနှင့် အလားတူရောဂါများကို ကုသပျောက်ကင်းစေနိုင်၍ ထိုအတွက် အင်ဖရာရက်ရောင်ခြည်များကို အလိုရှိသည့်နေရာပေါ်သို့ လွှတ် ထုတ် ကျရောက်စေနိုင်သော အင်ဖရာရက်ဓာတ်မီးတစ်မျိုးကို တီထွင်ထားပေသည်။
Infrared (IR) ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင် infrared light ဟုခေါ်သည်ပြီး ပုံမှန်မြင်ရသောအလင်းများထက် လှိုင်းအလျားပိုရှည်သော လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ရောင်ခြည် (EMR) ဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် လူတို့၏ မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်၊ သို့သော် Pulse လေဆာရောင်ခြည်မှ ၁၀၅၀ နာနိုမီတာ (nm) s အထိလှိုင်းအလျားများရှိ IR ကိုအချို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ IR လှိုင်းအလျားများသည်မြင်နိုင်သောရောင်စဉ်တန်း၏ အနီရောင်အစွန်းမှ ၁၀၀ မီလီမီတာ (၃၀၀ GHz) အထိနာနိုမီတာ ၇၀၀ (ကြိမ်နှုန်း 430 THz) အထိတိုးချဲ့သည်။ အခန်းအပူချိန်အနီးရှိအရာဝတ္ထုများမှထုတ်လွှတ်သောအပူဓာတ်ရောင်ခြည်အများစုသည်အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြစ်သည်။ EMR အားလုံးကဲ့သို့ IR သည်တောက်ပသောစွမ်းအင်ကိုသယ်ဆောင်ပြီးလှိုင်းကဲ့သို့၎င်းနှင့်၎င်း၏ကွမ်တန်အမှုန်ဖြစ်သည့်ဖိုတွန်ကဲ့သို့ပြုမူသည်။
အနီအောက်ရောင်ခြည်ဓာတ်ရောင်ခြည်ကို ၁၈၀၀ ခုနှစ်တွင် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ဆာဝီလျံဟတ်ရှယ်လ်က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုသူသည် အပူမီတာအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည့်စွမ်းအင်တစ်မျိုးအား ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ထိုစွမ်းအင်သည် အနီရောင်အလင်းထက်စွမ်းအင်ပိုမိုနိမ့်သောရောင်စဉ်တန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မမြင်နိုင်ချေ။ နေမှစွမ်းအင်စုစုပေါင်း၏ ထက်ဝက်ကျော်သည် နောက်ဆုံး၌ [အဘယ်အချိန်၌] ကမ္ဘာကိုအနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြင့်ရောက်ရှိလာသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုအနီရောင်အောက်ရောင်ခြင်းအား စုပ်ယူခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း မျှချေသည် ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုစက်ဝန်းအပေါ် များစွာအကျိုးသက်ရောက်သည်။
အနီအောက်ရောင်ခြည်များ ရေဒီယိုသဘောတရားအရ တုန်ခါမှုလှုပ်ရှားမှုများကိုပြောင်းလဲသောအခါ ၎င်းတို့အား မော်လီကျူးများက ထုတ်လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ်စုပ်ယူခြင်းပြုသည်။ ၎င်းသည် dipole moment ပြောင်းလဲခြင်းတခုအတွင်းတွင် မော်လီကျူးတစ်ခုအတွင်းရှိတုန်ခါမှုပုံစံများကိုနှိုးဆွပြီး သင့်လျော်သောအချိုးကျမော်လီကျူးများအတွက်ထိုစွမ်းအင်အခြေအနေများလေ့လာရန်အသုံးဝင်သောကြိမ်နှုန်းအတိုင်းအတာဖြစ်စေသည်။ Infrared spectroscopy သည်အနီအောက်ရောင်ခြည်တွင်ဖိုတွန်များ၏စုပ်ယူမှုနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုကိုဆန်းစစ်သည်။
အနီအောက်ရောင်ခြည်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ သိပ္ပံပညာ၊ စစ်ရေး၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးချမှုများတွင်အသုံးပြုသည်။ ညဘက်မြင်ရသောကိရိယာများတွင် တက်ကြွသောအနီအောက်ရောင်ခြည် သုံး၍ လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအားသတိမထားမိစေဘဲ လေ့လာနိုင်အောင်ဖန်တီးထားသည်။ အနီအောက်ရောင်ခြည်နက္ခတ္တဗေဒကို ဖုန်ထူသောနေရာများဖြစ်သည့် မော်လီကျူးတိမ်များ၊ ဂြိုဟ်များကဲ့သို့အရာဝတ္ထုများကိုရှာဖွေရန်နှင့် စကြာဝဠာ၏အစောပိုင်းကာလများက အနီရောင်ပြောင်းသွားသောအရာဝတ္ထုများကို ကြည့်ရှုရန်အတွက် အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသောအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းများတွင် တတ်ဆင်အသုံးပြုအသုံးပြုသည်။ အနီအောက်ရောင်ခြင်သုံး အပူ-ပုံရိပ်ဖမ်းကင်မရာများသည် အပူထိန်းချုပ်စနစ်များတွင် အပူဆုံးရှုံးမှုအားသိရှိရန်အတွက်၊ အရေပြားအတွင်းရှိသွေးပြောင်းလဲစီးဆင်းမှုကိုလေ့လာရန်နှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏အပူလွန်ကဲမှုကိုရှာဖွေရန်အသုံးပြုသည်။
စစ်ရေးနှင့်အရပ်ဘက်အသုံးချမှုများအတွက် ပစ်မှတ်ရယူခြင်း၊ စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ညဘက်မြင်ကွင်း၊ ပစ်ခတ်ခြင်း နှင့် နောက်လိုက်ခြင်းစသည်တို့တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ပုံမှန်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ရှိလူသားများတွင် အထူးသဖြင့် လှိုင်းအလျား ၁၀ မီလီမီတာ (မိုက်ခရိုမီတာ) တွင်ဖြာထွက်သည်။ စစ်ရေးမဟုတ်သောအသုံးပြုမှုများတွင် အပူထိရောက်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ စက်မှုစက်ရုံစစ်ဆေးခြင်း၊ မူယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်း၊ ဝေးလံသောအပူချိန်အာရုံခံခြင်း၊ တာတိုကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး၊ ရောင်စဉ်တန်းနှင့် ရာသီဥတုခန့်မှန်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
↑ "Visual sensitivity of the eye to infrared laser radiation" (1976). Journal of the Optical Society of America 66 (4): 339–341. doi:10.1364/JOSA.66.000339. “The foveal sensitivity to several near-infrared laser wavelengths was measured. It was found that the eye could respond to radiation at wavelengths at least as far as 1064 nm. A continuous 1064 nm laser source appeared red, buta1060 nm pulsed laser source appeared green, which suggests the presence of second harmonic generation in the retina.”
↑ Lynch၊ David K.; Livingston၊ William Charles (2001)။ Color and Light in Nature (2nd ed.)။ Cambridge, UK: Cambridge University Press။ p. 231။ ISBN 978-0-521-77504-5။ 12 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Limits of the eye's overall range of sensitivity extends from about 310 to 1050 nanometers
↑ Dash၊ Madhab Chandra; Dash၊ Satya Prakash (2009)။ Fundamentals Of Ecology 3E။ Tata McGraw-Hill Education။ p. 213။ ISBN 978-1-259-08109-5။ 18 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Normally the human eye responds to light rays from 390 to 760 nm. This can be extended toarange of 310 to 1,050 nm under artificial conditions.
↑ "Sur la visibilité de l'ultraviolet jusqu'à la longueur d'onde 3130" (in French) (15 May 1933). Comptes rendus de l'Académie des sciences 196: 1537–9.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အနီအောက်ရောင်ခြည်&oldid=538192" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၂:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။